Tonka Coders & Sameeyayaasha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
K-12 Cilmiga Kombuyuutarka & Meelaha Sameeya
Waxaa nagu dhiirrigeliyay Code.org , waxaan hirgelinnay manhaj lambar siinta ah ee K-12 oo ardayda oo dhan ku baraya luqadda barnaamijka kombiyuutarka. Intaas waxaa sii dheer, Tonka Coders & Mers ayaa isku mar bixiya isla markaana horumariya shaqo koorso heer sare ah oo loogu talagalay ardayda doonaya inay ku takhasusaan aaggan. Barnaamijkani waa mid gaar ah – mid ka mid ah noociisii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ka dhaca gobolka Minnesota.
Xirfadaha barnaamijyada kombiyuutarka waxay muhiim u noqdeen guusha ardaydeena. Tani maahan sababta oo ah dhammaantood waxay ku kori doonaan kombuyuutar barnaamij, laakiin sababta oo ah ardaydeena waxay u baahan yihiin inay fahmaan sayniska ka dambeeya aaladaha dhijitaalka ah, oo door muhiim ah ka ciyaara adduunkeenna casriga ah. Ardaydu waxay u baahan yihiin inay abuuraan tikniyoolajiyad, ma aha oo keliya inay cunaan.
Safarku Wuxuu Bilaabmayaa: K-5 Xeerarka Tonka
Kordhinta Dhexe: MME & MMW Sayniska Kombiyuutarka
Khadka Dhamaadka: Dugsiga Sare
Yoolalka muddada-dheer ee manhajka
Waxbadan Ka Baro Xeerarka Tonka & Meelaha Sameeyaha
Minnetonka, ardayda waxay la kulmaan Sayniska Kombiyuutarka sida ugu horreysa Xannaanada. Dhammaan ardayda waxay baran doonaan nuxurka aasaasiga ah ee heerka fasal kasta. Go'aanka ku saabsan soo noqnoqoshada waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo loo eegayo heerka dugsiga iyo heerka fasalka.
Ardayda K-5 waxay baran doonaan xirfadaha aasaasiga ah ee kumbuyuutarka iyagoo adeegsanaya aalado kala duwan:
Ardayda xanaanada caruurta waxay isticmaali doonaan aalad gacmeed sida Bee-Bots iyo ciyaaro sida Robot Turtles.
Ardayda fasalka koowaad illaa iyo 5aad waxay isticmaali doonaan koorsooyinka aasaasiga ah ee sayniska kumbuyuutarka ee CodeF BF.
Ardayda xanaanada ilaa fasalka afaraad waxay sidoo kale isticmaali doonaan barnaamijyada sida ScratchJr si ay u bilaabaan adeegsiga xirfadahooda sireed si ay u soo saaraan mashruucyo muujinaya barashadooda maadooyinka kale sida caafimaadka, akhriska, cilmiga bulshada, iwm.
Ardayda fasalka shanaad waxay sidoo kale heli doonaan fursado ay ku bilaabaan sahaminta goobaha ciyaaraha ee Swift , Baro Xeerka 1 adoo adeegsanaya iPad-kooda 1: 1.
Kaqeybqaado barnaamijka kombiyuutarka usbuuca illaa saacad ah dhacdo sireed . Heerarka fasalada kaladuwan waxay sahamiyaan barnaamijyo kaladuwan oo loogu talagalay dadaalka ballaaran ee degmada si loogu soo bandhigo lambarro badan fasalka.
Fursadaha Dugsiga Kadib:
Waxaa jiri doona dhowr iskuul kordhin oo iskuul kadib ah iyo xirfad dhisid, iyo sidoo kale caqabado iskuulka oo dhan iyo Degmooyinka oo dhan ah.
Sanadaha dugsiga dhexe waxay muhiim u yihiin dhismaha aasaas adag iyo jacaylka sayniska kombiyuutarka. Dugsiga dhexe, ardayda heer kasta waxay leeyihiin fursad ay ku doortaan koorsooyinka sayniska kombiyuutarka. Inta lagu jiro fasalka 6aad, ardaydu waxay qaadan karaan aasaaska CS, oo u soo bandhigaya habab badan oo aan ku aragno koodh nolosheena ah sida, ciyaaraha iyo animation, xisaabinta jirka iyo barnaamijyada. Koorsooyinka fasalka 7aad iyo 8aad ee soo socda, ardaydu waxay dooran karaan mid ka mid ah aagagga ay jecel yihiin inay wax badan ka bartaan.
Wax ka beddelka tikniyoolajiyada waxay abuurtay baahi sii kordheysa oo loo qabo dadka khibrada iyo aqoonta u leh cilmiga kombuyuutarka. Loo shaqeeyayaal badan waxay la kulmaan yaraanta dad farsamo sare u tababaran, gaar ahaan dhinacyada la xiriira sayniska kombiyuutarka. Haddii ardaydu qorsheynayaan inay aadaan kulliyad, kulliyad farsamo, ama shaqo isla marka ay dhammeeyaan dugsiga sare ka dib, waxay heli doonaan macluumaad qiimo iyo xirfado farsamo. Xirfadaha maanta waxay u baahan yihiin diyaar garow tacliineed iyo mid farsamo oo xoog leh. Iyadoo si taxaddar leh loo qorsheeyo xulashada koorsada, ardaydu waxay horumarin doonaan fursadaha shaqadooda.
Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu sidoo kale bixiyaa koorsada Sayniska Kombiyuutarka iyada oo loo marayo Tonka Online , taas oo ah ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo haddii ay kugu adkaato inaad ku biirto koorsooyinka CS ee jadwalka caadiga ah ee Dugsiga Sare. Ardayda xiiseyneysa sahaminta Naqshadeynta Isticmaalaha (UX) Naqshadeynta waxay horumarin karaan xirfadahooda koorsadan gaarka ah ee lagu bixiyo VANTAGE.
Waxbadan ka baro Sayniska Kombiyuutarka ee MHS
Yoolalkayaga muddada-dheer ee barnaamijka Codsiga Dugsiga Hoose waxay u dhexeeyaan carruurnimada hore ilaa dugsiga sare. Manhajka, waxaan ...
Ku soo bandhig barnaamijyada kombiyuuterka madadaalo, codsiyada dhisida xirfadaha dugsiga hoose ee Ingiriisiga, xisaabta, sayniska iyo farshaxanka si loo hubiyo ardayda inay xoojiyaan aasaaska aqoonta iyo xirfadaha barnaamijyada kombiyuutarka.
Baadh xirfadaha kala duwan ee u baahan xirfadaha barnaamijyada kombiyuutarka.
Waxaad siisaa fursado codaynta manhajka, barnaamijyada iyo naadiyada, labadaba inta lagu jiro iyo ka dib dugsiga.
Ka qaybgal ardayda khibradaha iyo tartamada barnaamijyada ku saleysan, oo ay ku jiraan CoderDojo, Droodle, Code Savvy iyo Gabdhaha Tech.
Taageer fursadaha manhajka dheeraadka ah iyo sidoo kale tartamada heer gobol iyo heer qaran ee aagga barnaamijka.
U qaabeeyaan dugsiyo adag iyo xulasho dugsi sare manhaj heer jaamacadeed ah, oo ay ku jiraan AP Computer Science iyo VANTAGE koorsooyin si loogu diyaariyo ardayda barnaamijyada tacliinta sare.
Dhis boortofooliyo xoog leh oo iskaashi bulsho iyo warshadeed si loo taageero heerarka sare ee waxbarista iyo marin u helka ilaha warshadaha, khibradda iyo fursadaha ardayda.
FIKIR | CUSUB | ABUUR
Samaynta waxay kobcisaa barashada iyadoo la sameynayo.
Adduunku wuxuu isku beddelayaa xawaare aad u fiican. Mustaqbalku wuxuu u baahan yahay dad mushkilad xallin kara, la qabsan kara, kulana xiriiri kara goobaha shaqada iyo bay'adaha sii murugsan. Space Maker -Hub wuxuu ku martiqaadayaa ardayda Minnetonka inay dhisaan adduunka ay qiyaasi karaan.
Laga soo bilaabo guga 2017, Hay'adda 'Minnetonka Foundation' waxay taageertay barashada ku-saleysan iyada oo siineysa agabyo, tababarro iyo dhacdooyin lagu taageerayo gacmo-barashada khibradaha ku saabsan teknolojiyadda, sayniska kombiyuutarka, qaabeynta, sameynta iyo injineernimada ee dugsiyada PreK-8 Minnetonka. Kaqeyb qaadashada aasaasiga waxay bixisaa khibrado waxbarasho oo ardaygu wado oo furan oo dhiirrigeliya hal-abuurka, iskaashiga iyo wada shaqeynta si loo gaaro himilo.
Waxbadan ka baro Tonka Coders & Sameeyayaasha:
Minnetonka Aljebra Ardayda Naqshadaynta iyo 3D Dawo Xumbada Bukaanka Bukaanka
Minnetonka wuxuu martigaliyaa Harvard Weekend Code Academy
20 Tusaalooyinka Mashaariicda Makerspace ee Fasallada Minnetonka
40 + Fikradaha loogu talagalay Codeynta Guud ahaan Manhajka Dugsiga Dhexe: Xisaabta, Band, Farshaxanka Luuqadda, Sayniska, Isbaanishka & Dheeraad ah
Soo koobista Sawirka: 7,300+ Saacadood oo Codbixinta Diisambar ah ee Dugsiyada Minnetonka
Barnaamijka Koodh Minnetonka ee Arday kasta oo K-5 ah oo Hadda lagu Qiimeeyay Kaararka Warbixinta
Maxay Tahay In Wax Loo Barto Summada? Isla Sababaha Loogu Barto Qorista Xitaa Marka Aan Dhammaan Ardayda Ahayn Qoraalo
Adeegsiga tikniyoolajiyadda si aad ugaga fikirto taariikhda & kaqeybgal abuurka ardayda
Xeerka Dabadiisa: Adeegsiga Spheros ee Dugsiga Dhexe ee Barashada Qoto Dheer
Hoolka waraaqaha ah wuxuu ku gudbaa dugsiga: Waxaa jira (Arday Loo Sameeyay) Codsi Taas Loogu Talo Galay
Robotyada qoob-ka-ciyaarka ee lagu diyaariyey Fasalka 6-aad STEM Class
Naqshadeynta Ciyaaraha Fiidyowga iyo Kombiyuutarka Koodhadhka Dugsiga Sare
Minnetonka Linear Algebra 8-aad Fasalada 8-aad Waxay U Isticmaalaan Bootstrap-ka Koodh
Maalinta Dhulka Dhacdooyinka Ka Sameeya Qoysaska Dugsiyada Minnetonka
Hub: Daahfurka Minnetonka Makerspaces
Maarso 17: Maalinta Saint Patrick
Waxaa abuuray: Braeden Knight iyo Kellen O'Connell
Waxaan door bidnay inaan naqshadeyno Maalinta Saint Patrick maxaa yeelay waa tan ugu xiisaha badan ciidaha. Sabab kale ayaa ahayd, maxaa yeelay, spriters waa ku faraxsan yihiin in ay sawiraan.
Maarso 20: Guga Equinox
Waxaa abuuray: Connell Flemming iyo Ricky Hillard
Mashruucan waxaa loogu talagalay sayniska kombiyuutarka ee fasalka lixaad. Waxaan door bidnay inaan u qaabeyno isbarbar dhigga guga, maxaa yeelay xilliga gu'ga waa xilliga qabow ee la kululeeyo, barafka ilaa cawska, iskuulku iskuul la'aan, geedo madhalays ah ilaa caleemo
Abriil 1: Maalinta Nacasyada Abriil
Waxaa Abuuray: Alex iyo Sebastian
Waxaan dooranay maalinta nacasyada bisha Abriil maxaa yeelay waxaan jecel nahay baashaal waana maalin xiiso leh. Abriil Fools day wuxuu yimaadaa kowda Abriil. fasaxa markii ugu horaysay wuxuu bilaabmay 1585.
Abriil 12: Maalinta Caalamiga ah ee Duulista Hawada Aadanaha
Waxaa abuuray: Celine Sorour iyo Evelyn Malec
Waad salaaman tahay, Waxaan u qorsheynay Maalinta Caalamiga ah ee Duulimaadka Hawada Aadanaha. Maalintan waxaa la xusaa 12-ka Abriil. Waxaan dooranay maanta, maxaa yeelay waxay u ahayd guul weyn NASA oo waxay ka caawisay dhammaan dayax gacmeedyadii iyo alwaaxdii la sameeyay.
Abriil 15: Maalinta Xuska Titanic Qaranka
Waxaa abuuray: Sarah D., Liam S., iyo Tyler W.
Waxaan dooranay Maalinta Xusuusta Titanic-ka maxaa yeelay Titanic-ka ayaa ahaa mid aan la ilaawi karin
markab degay Waa musiibo in la xuso mudan. Sidoo kale waa tusaale adiga
waa inuu rajeeyaa waxa ugu fiican, laakiin u qorsheeyaa kan ugu xun. Waa xaalad aan ka baran karno
hubi inaysan markale dhicin.
Abriil 22: Maalinta Dhulka
Waxaa abuuray: Jack, Larah, iyo Emilio
Waxaan dooranay maalinta dhulka maxaa yeelay waxaan u maleynay inay tahay maalinta ugu fiican. Dhammaanteen waxaan ka fikirnaa maalinta dhulka inay tahay
maalin weyn maxaa yeelay waxaan u dabaaldegnaa meeraha aan ugu yeerno dhulka ee inagu haysay
kumanaan sano. Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay
Abriil 28th: Maalinta Superhero Qaranka
Waxaa abuuray: Brooklyn, Zoey & Safaa
Waxaa abuuray: Owen, Sam iyo Gabriel
Waxaan dooranaynaa maalinta Superhero Qaranka maxaa yeelay waxaa ku jira superhero badan oo kuwan kuwan ka jira
waqtiyada adag, xitaa kuwa aan xirneyn koofiyadaha. Shaqaalaha aasaasiga ahi waa qaar
superheroes Waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo, dadka ka shaqeeya isbitaalka- kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta,
Macallinka iyo dad kale oo badan. Geesiyaashu waa dad caawiya dadka kale daryeel badana leh
ku saabsan dadka, waxay noqon karaan saaxiibbadaada iyo qoyskaaga. Mararka qaar geesiyaalku waa kuwo aan la mahadin,
laakiin qof walba, waxaan jeclaan lahayn inaan dhahno ... Waad ku mahadsan tihiin dhammaan halyeeyada halkaas jooga, annaga
Abriil 30th: Qaadashada Qaranka ee Hoyga Xayawaanka Hoyga
Waxaa abuuray: Eva, Marla & Mason
Waxaan door bidnay inaan qabano mashruuceena oo aan ku sharfeyno Ansixinta Qaranka ee Hoyga Xannaaneynta Hoyga 30-ka Abriil 30-keeda.
Awood u lahaanshaha isticmaalka xayawaannada qurxoon iyadoo lala kaashanayo arrin dhab ah oo muhiim ah ayaa bini'aadamnimada
mawduuca guud ahaan. Xayawaanada xayawaanku waxay ka caawin karaan dadka naafada ah inay qabtaan shaqooyin ayna ka caawiyaan inay ilaashadaan
ammaan ah. Sidoo kale xayawaannada badankood waa macaan yihiin wax dhibaato ahna uma geystaan aadanaha. Xayawaanka guryuhu waxay kaloo kaa caawin karaan samaynta a
Qofku waa faraxsan yahay haddii ay murugo dareemayaan wax kastoo jira. Taasi waa sababta aan u dooneynay inaan sameyno National
maalin xayawaanka! Ha sugin inaad hesho xayawaan rabaayad ah!
1da Maajo: Maalinta Dibada ee Qaranka
Waxaa abuuray: Brooks, Oliya iyo Andrew
Tani waa muhiim maxaa yeelay ilmo kasta / Bini'aadam kasta waa inuu u baxaa banaanka maalin walba hawo nadiif ah iyo jimicsi. Mashruucan xoqan xarafka T wuxuu ku boodayaa xarig. Xarafka O wuxuu dul wareegayaa shaashadda. Xarafka N waa skateboard. Xarafka K ayaa ciyaaraya kubbadda koleyga. Xarafka A banaanka ayuu ku raaxeysanayaa.
4-ta Maajo: Maalinta Macallimiinta Qaranka
Waxaa abuuray: Emma G., Anders E. iyo Mira J.
Waxaan u dooranay maalinta macalinka qaranka maxaa yeelay macalimiintu had iyo jeer waxay u shaqeeyaan si aad ah si ay wax u baraan dadka aduunka. Macallimiinta Minnetonka waxay had iyo jeer qabteen shaqo la yaab leh oo ardayda wax loo baro Maajo 4-keeduna waa maalin la qaddariyo. Macallimiintu si adag ayey u shaqeeyaan si ay u daraaseeyaan oo ay casharo isugu geeyaan, laakiin dadka badankood ma qirtaan wax kasta oo ay qabtaan. 4-ta Maajo waa maalin la qadariyo waxa macalimiinta ay keenaan iskuulada waxaana rabnaa in dadku ay aqoonsadaan macalimiinta ayna u dabaal degaan waxa ay qabtaan.
5-ta May: Cinco De Mayo
Waxaa abuuray: Ella iyo Vivi
Waxaan dooran karnaa cinwaanka Cinco de Mayo maxaa yeelay waa maalin fasax ah. Waxaan jecel nahay dhammaan midabada iyo muusikada ciidaan. Intaa waxaa sii dheer labadeenaba waxaan ku jirnaa Isbaanishka.
Meey 5th: Maalinta Hawada Qaranka
Cirbixiyeenada ayaa naftooda halis galiya markay tagaan hawada sare. Sidoo kale waxbadan ayey qabteen sanadkan sida
oo bilaabay rover a ilaa mars. Boosku waa wax xiiso leh, waxaanan u maleyneynaa in waqti in la qaado si loo wada dabaaldego
waxyaabaha quruxda badan ee koonkeenna ka jira.
8-da May: Maalinta Qasacada Qumbaha Qaranka
Waxaa abuuray: Sierra Lindemann & Zac Magness
Doodleheena 'Tonka Doodle' waxaan u dooranay Maalinta Qumbaha Xayawaanka Qumbaha, marka waa kan xaqiiqda ku saabsan kareemka kareemka qumbaha. Sanadkii 1800 qumbaha way adkeyd in la raro iyada oo aan halaabin, sidaa darteed waa la jarjaray oo hilibka qumbaha waa la qalajiyey. Hada, iyagoo sahal u ah safrinta, waxay isku dayeen habab kala duwan oo ay ku cunaan waxaana ka soo baxay keega kareemka qumbaha!
Meey 22: Dhalashada Arthur Conan Doyle
Waxaa Sameeyay: Lucas Wrangle iyo Asher
Doodkeenna Tonka waxaan u dabaaldegeynaa dhalashadii Arthur Conan Doyle. Wuxuu ku dhashay bishii may 22, 1859 Scotland, wuxuuna caan ku yahay qorista Sherlock Holmes. Maalinti dhalashadiisu waa May 22.Waxa kale oo uu shahaadada caafimaadka ka qaatay Jaamacadda Edinburgh. Waxaan xusnay maanta maxaa yeelay wuxuu qoray buug aan labadeenaba jecelnahay (Sherlock Holmes) waana sir weyn.
U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno